I-Trendy Tech kunye neDatha eNkulu: Yintoni ekufuneka ujonge kuyo kuPhando lweNtengiso kwi2020 | Martech Zone
I-Trendy Tech kunye neDatha eNkulu: Yintoni ekufuneka ujonge kuyo kuPhando lweMarike ngo-2020
NgoMvulo, Matshi 2, 2020 NgoMvulo, Matshi 2, 2020 I-Sudip Saha
Oko kwakudala kubonakala ngathi ikamva elikude selifikile: unyaka we-2020 ekugqibeleni usifikile. Ababhali beentsomi zesayensi, oososayensi abadumileyo, kunye nabapolitiki kudala baxela kwangaphambili ukuba umhlaba ungabonakala njani kwaye, ngelixa singenakho ukuba neemoto ezibhabhayo, iikholoni zabantu eMars, okanye oohola bendlela, inkqubela phambili kwezobuchwephesha banamhlanje iyamangalisa ngokwenene- kwaye qhubeka ukwandisa.
Xa kuziwa kuphando lwentengiso, ubuchwephesha bezinto ezintsha kule minyaka ilishumi intsha buzisa nemiceli mngeni eza kufuna ukoyiswa ukuze kuzuzwe impumelelo engapheliyo. Nantsi eminye imiba ebaluleke kakhulu ekufuneka uphando lweemarike luzijonge kwi-2020 kunye nendlela iinkampani ekufuneka zizenze ngayo.
Ukuhlala ngokuqhubekayo kunye ne-AI
Eyona nto ibaluleke kakhulu kule minyaka ilishumi izayo iya kuba kukunyuka kobukrelekrele bokufakelwa kuwo onke amashishini. Ngapha koko, inkcitho iyonke kwi-AI kunye neenkqubo zokuqonda kulindeleke ukuba zigqithe kwi-52 yezigidigidi zeedola ngo-2021, kuphononongo lwakutsha nje olufumanise ukuba i-80% yabaphandi bezentengiso bakholelwa ukuba i-AI iya kwenza ifuthe elihle kwintengiso.
Ngelixa oku kunokubonakala ngathi kubonisa ukuthatha okukufuphi komatshini okhokelwa ngoomatshini, sisenendlela ende ekufuneka sihambe phambi kokuba oomatshini bakwazi ukulawula ulawulo lwendawo yokusebenza-zininzi kakhulu izinto ezingaphandle kwe-AI ezingenakukwenza okwangoku.
Kwicandelo lophando lwentengiso, indibaniselwano yesiqhelo kunye nezixhobo zophando ezisekwe kwi-AI ziyafuneka ukuze zisebenze kakuhle. Ukuqiqa emva koku kukuba, nangona inkqubela phambili kubuchwephesha be-AI ibimangalisa, ayinakuphindaphinda ukuqonda komntu okanye ukubonelela ngokuqonda okunzulu kwizinto ezahlukeneyo zangaphandle zeshishini elinikiweyo.
In uphando lwemakethiI-AI isetyenziselwa ukwenza imisebenzi emincinci ebopha ixesha labaphandi-izinto ezinje ngokufumana iisampulu, ukuhambisa uphando, ukucoca idatha, kunye nohlalutyo lwedatha eluhlaza, kukhulula abantu ukuba basebenzise ingqondo yabo yohlalutyo kwimisebenzi enzima. Abaphandi emva koko banakho ukuhambisa ngokupheleleyo uninzi lolwazi lwabo olukhulu ukutolika iintsingiselo kunye nokubonelela ngolwazi-uninzi lwazo oluqokelelwa kwizixhobo ezizisebenzelayo.
Ngamafutshane, itekhnoloji ye-AI inokufumana ukubonwa kwedatha ngexesha elifutshane. Nangona kunjalo, ayisoloko ilungile idatha- kwaye nantsi apho ingqondo yomntu iza khona ukufumana eyona datha ichanekileyo onokuyisebenzisa kuphando lwentengiso. Sebenzisa amandla e-AI kunye nobukrelekrele beshishini lomntu kwizinto zabo zendalo kunika iinkampani ukuqonda ukuba ngekhe bazuze ngenye indlela.
Ukhuseleko lwedatha kunye nokungafihli kwi-Digital Age
Ngehlazo elitsha labucala elibonakala minyaka le, ukhuseleko lwedatha kunye nokonyuka kolawulo ngumcimbi omkhulu phantse kuwo onke amashishini ajongana nedatha yabathengi. Ukungathembani koluntu ekunikeni idatha yabo sisihloko esishushu ekufuneka yonke inkampani yophando yentengiso ithathele ingqalelo ngoku nakwixesha elizayo.
Oku kubaluleke kakhulu kunyaka ozayo. I-2020 izakuzisa neziganeko ezibini eziphambili zehlabathi ezinokuthi zigcwaliswe ngamaphulo okusasaza ulwazi kubantu besithathu: iBrexit kunye nokhetho lwaseMelika. Ukungafihlisi kwimveliso yophando yentengiso kuya kuba yinto ephambili: Iinkampani kufuneka zibonise umhlaba ukuba ukuqonda abakufumanayo kuyakusetyenziswa njengempembelelo elungileyo yokuphucula ubomi babantu kunokuba isetyenziselwe ukusasaza. Ke iinkampani zinokuziqhelanisa kwaye ziphinde ziyithembe njani imeko yemozulu yangoku?
Ukuze ufikelele kule ngxoxo yokuziphatha, iinkampani zophando lweemarike kufuneka zithathe ithuba lokwenza ikhowudi yokusetyenziswa kwedatha. Ngelixa imibutho yorhwebo yophando efana ne-ESOMAR kunye ne-MRS kudala igcina izikhokelo ezithile zeenkampani zophando lweemarike ukuba zithobele xa kufikwa kumba wokujongana nale micimbi, kufuneka kubekho uphononongo olunzulu lokuziphatha xa usenza uphando.
Impendulo sisixhobo sobomi sophando lwentengiso, esihlala sisiza kuphando olusetyenziselwa ukuphucula iimveliso, ukubandakanyeka kwabathengi okanye umsebenzi, okanye ezinye izinto ezininzi. Zeziphi iinkampani ezenzayo ngedatha efunyenwe kolu phando- kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukuba zidlulisela njani ngokufanelekileyo kwabo bathabatha idatha- ziyimfuneko kwimikhankaso yophando yexa elizayo.
Xa kufikwa kubumfihlo bedatha, ibhloko ye-blockchain inokuba yimpendulo yokuqinisekisa abathengi ukuba idatha yabo igcinwe ngokukhuselekileyo nangokusekuhleni. I-blockchain sele ifumene ukubalasela njengenye yeetekhnoloji ezinobuchule benkulungwane ye-21 kwaye, kwi-2020, ukubaluleka kwe-blockchain kuyonyuka kuphela njengoko amashishini amatsha eqala ukuyenza kwiinkqubo zawo zokukhusela idatha. Nge-blockchain, idatha yomsebenzisi inokuqokelelwa ngokukhuselekileyo nangokucacileyo ziinkampani zophando lweemarike, eyandisa ukuthembana ngaphandle kokunciphisa ukusebenza kwedatha.
Ikamva eliqaqambileyo lokuQokelelwa kweDatha ye5G
I-5G ekugqibeleni ilapha, kunye neenkampani zonxibelelwano eziqhubeka nokukhupha ukufikeleleka kwizixeko kwihlabathi liphela. Nangona kuya kuthatha ixesha ukufumana ezona zibonelelo zibaluleke kakhulu, iimoto ezingakhangeliyo, imidlalo ye-VR engenazingcingo, iirobhothi ezilawula kude, kunye nezixeko ezifanelekileyo ziyinxalenye yekamva elimangalisayo eliya kuqhutywa yitekhnoloji ye5G. Ngenxa yoko, iinkampani zophando zentengiso ziya kudinga ukufunda ukuba zingaphunyezwa njani i-5G itekhnoloji engenazingcingo kwizicwangciso zazo zokuqokelela idatha.
Olona manyano lucacileyo kuphando lwentengiso iya kuba kukunyuka kwenani lophando olugqityiweyo kwizixhobo eziselfowuni. Njengoko abathengi baya kuba nakho ukufumana isantya esiphezulu kakhulu kwizixhobo zabo eziphathwayo, banamathuba amaninzi okufikelela kuphando kwizixhobo eziphathwayo. Kodwa ngokunyuka kokusetyenziswa kwezixhobo ezifanelekileyo kwiimoto, izixhobo zasekhaya, iinkqubo zasekhaya, kunye namashishini, ubungakanani bokuqokelelwa kwedatha kunyuke kakhulu. Uphando lweNtengiso kufuneka lisebenzise eli thuba.
Ukusuka kubuchwepheshe obutsha ukuya kutshintsho kwindlela abathengi abasabela ngayo kwidatha, i-2020 izakuza notshintsho oluninzi ekufuneka iinkampani zophando lweemarike zithobele. Ngokuqhubeka nokuziqhelanisa nenkqubela phambili yetekhnoloji ngokulungisa iindlela zabo, uphando lweemarike luya kuba lulungele ukuba luphumelele ngoku nakweli shumi leminyaka.
tags: 5gkukubhadla okungeyonyanimiseloKuhleni
ISudip Saha, COO ye Ukuqonda kweNtengiso yexesha elizayo, uphando olwenziweyo kwintengiso kunye nefemu yokubonisana. Ingcali kwezoshishino ejolise ekukhuleni enamava amakhulu kuphando lweemarike nakulawulo lweeprojekthi kwi-APAC, i-EMEA, naseMelika, iSudip likholwa elomeleleyo kunye nomcebisi wezisombululo ezisekwe kubuchule, kugxininiso ekwenzeni izisombululo ezizenzekelayo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo .
I-imeyile: Chonga ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-35 kwiTrafikhi yakho yeWebhu engaziwayo kwaye ukhulise uluhlu lwakho lwe-imeyile
Amaqonga ama-30 oNxibelelwano ngezeNtlalo